Barcelona oo xaqiijisay xilliga ay saxaafadda usoo bandhigeyso xiddigeeda Luis Suarez | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barcelona oo xaqiijisay xilliga ay saxaafadda usoo bandhigeyso xiddigeeda Luis Suarez
Barcelona ayaa ku dhawaaqday inay Luis Suarez taageereyaasheeda ugu soo bandhigi doonto garoonkeeda Camp Nou Isniinta ka dib markii laga qafiifiyey ganaaxiisa afarta bilood ah ee ka saaran kubadda cagta.
27 sanno jirkaan, oo Barcelona ay 75 milyan oo ginni ugala soo wareegtay Liverpool horaantii xagaagaan, ayaan markii hore loo soo bandhigi karin saxaafadda iyo taageereyaasha maadaama uu ganaax ka saarnaa wax kasta oo xiriir la leh kubadda cagta.
Ka dib markii uu kiiska u qaaday Maxkamadda Isboortiga, CAS ayaa maanta ku dhawaaqday inuu ganaaxa xiddigaan ka saaran ciyaaraha caalamiga ah uu sidiisii hore sii ahaan doono, laakiin weeraryahanka ayaa loo ogolaaday inuu tababar la qaadan karo ciyaartoyda kooxdiisa isla markaana uu ciyaari karo kulamada saaxiibtinimada ah.
Barca ayaana haatan website-keeda ku xaqiijisay inuu xiddiga heerka caalami ee dalka Uruguay tababarkiisii ugu horreeyey kala qeyb qaadan doono kooxdiisa cusub berri oo Jimco ah, isla markaana ay taageereyaasha usoo bandhigi doonto ka hor ciyaarta koobka Isniinta ee Joan Gamper Trophy.
Bayaan ay soo saartay kooxda reer Spain ayaa lagu yiri: “FC Barcelona waxay halkaan ka xaqiijineysaa inuu Luis Suarez tababarka Ciutat Esportiva Joan Gamper kula soo biiri doono kooxda berri oo Jimco ah saacaddu marka ay tahay 9.30am.
“Si la mid ah, saxaafadda ayaa loogu soo bandhigi doonaa Camp Nou, Suarez isagoo ah ciyaaryahan cusub oo FC Barcelona ah Isniinta ka hor ciyaarta Joan Gamper Trophy.”